Ngaba lixesha lokutyala imali kwiimarike ezisakhulayo? | Ezezimali
Omabini la mazwe aseYurophu naseMelika sele eza kufikelela kwelona nqanaba liphezulu kwixabiso lokhuseleko lwawo. Ngezinye iimpawu zobuthathaka ezinokuthi zitshintshe imeko kwiinyanga ezizayo. Ukongeza, ayinakulityalwa ukuba iingxowa ezivela kwikota yesibini yonyaka zezi ngokwesiko bearish. Apho ikwadlala ngokuchasene nenyani yokuba iimarike zaseMelika zinembali yokunyuka kwabo kwaye le meko kufuneka ime ngamanye amaxesha okanye kwenye. Kwaye oku kunokuba kufutshane kakhulu kwikhalenda.
Ngakolunye uhlangothi, kufuneka kuqatshelwe ukuba imarike yemasheya yaseSpain Kuthengiswe i-41.407 yezigidi zeerandi ngoJanuwariI-6,8% ngaphezulu kwenyanga ephelileyo kunye neyona nyanga ibalaseleyo ukusukela ngo-Okthobha, nangona i-18,6% ingaphantsi kweyoMqungu ngo-2018. Ukuthengiswa kweStock yaseSpain kunye neMarike (BME). Oko kukuthi, ukubuyela kwimisebenzi kuqatshelwa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi ngenxa ye-rally ye-bullish eyenzeka ngoJanuwari. Ngokwanda okuthe gabalala kuzo zonke iimarike zezabelo.
Ujongene nokupheliswa okunokwenzeka kweemarike zamasheya zamanye amazwe, lixesha elifanelekileyo lokujonga ezinye iindlela zotyalo-mali. Ngale ndlela, isisombululo esifanelekileyo simele iimarike zokulingana zamanye amazwe asahlumayo. Kunye amandla aphezulu ngaphezulu kweemarike zemveli. Nangona kwelinye icala, ziyimisebenzi ethwala umngcipheko omkhulu kunenye ngenxa yeempawu ezizodwa zeemarike zesitokhwe. Nazi ezinye zeembono zokulawula ukonga kwiinyanga ezizayo.
1 Ukuvela: IBrazil yeyokuqala
2 Ithemba kuMzantsi-mpuma Asia
3 Ngomngcipheko, imarike yemasheya yaseTurkey
4 Ezinye iindlela zotyalo-mali
Ukuvela: IBrazil yeyokuqala
Amandla e-Ibero-American yeyona nto ibheja yinxalenye elungileyo yabahlalutyi bezezimali bamanye amazwe. Ayilolize, indlela aziphethe ngayo ibintle kakhulu ukusukela oko Jair Bolsonaro uthathe ubongameli belizwe. Ngokunyuka ngokubanzi kumaxabiso ale ndawo ibaluleke kangaka yentengiso kwizwekazi laseMelika. Apho i-Bovespa inyuke ngeli xesha ngaphezulu kwe-10% kwaye ibonisa ubuchwephesha obungenakulinganiswa kuzo zonke iindawo zokujonga. Ngandlela thile, kubangelwe liliza lokungabinakho ukusebenza kweli lizwe kwaye iimarike zezemali zithande kangako.
Ukusuka kule meko ngokubanzi, imarike yemasheya yaseBrazil inokuba yenye ye iinketho ezicacileyo ukuba abatyali mali abancinci nabaphakathi kufuneka benze imali abayongayo ukusuka ngoku ukuya phambili. Ngaphaya kokunye ukuthathelwa ingqalelo kwezobuchwephesha nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko zokhuselo ezidweliswe kwintengiso yezemali. Kwelinye icala, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba yintengiso yemasheya enobungozi obuninzi kwaye oku kufanele ukuba kukwenze ulumke ngakumbi kwimisebenzi eyenziwayo.
Ithemba kuMzantsi-mpuma Asia
Enye yeemarike zezemali ezinokuxhamla kakhulu kwisivumelwano sokurhweba phakathi kweMelika kunye neChina ngokungathandabuzekiyo sesona simelwe ziidragons zaseAsia. Konke xa zihluma ukunyuka okuphezulu kwaye yintoni ebaluleke ngakumbi kuwe, ngevolumu emangalisayo yokugaya abantu. Oku kuphakamisa ukuba banokuphuhlisa ukonyuka okutsha ukusukela ngoku, kwanokwazi ukuba kuya kubakho izilungiso kwangexesha kumaxabiso abo.
Ezi marike zamanye amazwe zinokwenziwa isimanga esikhulu ukuba lo nyaka siwuqalile usigcinele wona. Apho yenye yezona zintle kakhulu kulungelelwaniso lwamanye amazwe kwaye zinokubaluleka kokuphononongwa kwakhona kwiinyanga ezizayo. Inokuba lolunye uhlobo olunobundlongondlongo kubatyali mali abancinci nabaphakathi, ukuba nje banokulawula ukusebenza kwabo ukuthintela iimeko ezingalindelekanga kwiiakhawunti zabo zokhuseleko. Asithethi kuphela ngemakethi yaseTshayina okanye yaseJapan, kodwa ngawo onke amazwe akule ndawo ibalulekileyo yomhlaba.
Ngomngcipheko, imarike yemasheya yaseTurkey
Alithandabuzeki elona ukubheja kuyingozi kuko konke kwaye ngenxa yeempawu ezizodwa zentengiso yezabelo yamanye amazwe. Apho isalathiso sesitokhwe sinokunyuka kakhulu, kodwa sinciphise ixabiso elifanelekileyo ngenxa yoqoqosho lwaseTurkey. Apho ixabiso kwiimarike zezemali zemali yalo ikwadlala indima ebaluleke kakhulu, ngakumbi kuyo utshintsho nemali yaseMntla Melika. Ewe kunjalo, umngcipheko awukho mva, kodwa imbuyekezo inokuba phakathi kwezona zibalulekileyo kwiimarike zamanye amazwe.
Kwelinye icala, yimarike yokulingana ethi yahlulwe ngokuguquguquka okukhulu. Umahluko obaluleke kakhulu phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi kwaye oko kwenza ukuba intengiso yezemali ibe nomtsalane kwimisebenzi yorhwebo. Ke ngoko, imarike yemasheya yaseTurkey yenye yeendlela ezizezinye zabatyali mali abasesichengeni kwaye abaziyo ukulawula iimvakalelo zabo ngamaxesha okungazinzi okukhulu. Kuba kuyinyani ukuba ii-euro ezininzi zinokushiyeka endleleni kwaye ayinguye wonke umntu onokuthatha le meko ikhethekileyo.
Ezinye iindlela zotyalo-mali
Ngaphandle kwezi marike zokulingana esizichazileyo, akukho nto inye ngeli xesha. Ukuba konke ukuboniswa okuncinci kwifayile ye- Irussian stock exchange, Kuxhomekeke kwindaleko kwixabiso leoyile ekrwada. Kodwa rhoqo ngendlela encinci, oko kukuthi, phantsi kokusebenza kwexabiso elincinci lemali. Nangona izikhundla zinokuvulwa ngengxowa mali yotyalo-mali kwingeniso eyahlukileyo apho kukho izabelo ezidweliswe kolu rhwebo lwemali. Kulawulwa kuyo yonke indawo intshukumo yokulungisa izikhundla.
Okokugqibela, kunokwenzeka ukuba ubone ukuba kwenzeka ntoni kwiimarike ezisakhulayo, ezinje ngezo zimelwa zii-India. Nangona sinokufika emva kwexesha kancinci njengoko kubonakala ngathi okuhle kugqityiwe. Ngayiphi na imeko, yimarike enamandla kakhulu kwaye kuya kufuneka ukuba ihlalutywe ukumisela ukuba ndingena okanye andiyingeni le ntengiso. Apho umngcipheko uphezulu kakhulu kwaye kuyacetyiswa ukuba ulumke ekuthatheni izikhundla ukusukela ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ngaba lixesha lokutyala imali kwiimarike ezisakhulayo?
Ukuqinisekisa njani ukubuya ngaphezulu kwe-3% kulondolozo?